Maungtintyin: November 2010
ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အမျက်ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ဟန့်တားရန် ကူညီသည်
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်က အကျွန်ုပ်တို့ကို အနာတရ ဖြစ်စေပြီးတဲ့နောက် - အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းစေပြီးတဲ့နောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ရိုင်းပျစော်ကားပြီးတဲ့နောက် - ထိခိုက်မှုကို ကုစားဖို့အတွက် အမြဲတမ်းရှာဖွေကြပါတယ်။
Samuel Johnson က The Rambler - ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ - ပညာရှိတဲ့သူဟာ ခွင့်လွှတ်ဖို့ အဆောတလျင် ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ သူဟာ အချိန်ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ တန်ဖိုးကို သိပါတယ်။ သူဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခများနဲ့ သေဆုံးဖို့ အဲဒီအရာကို ခံစားလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ- ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဒေါသဟာ သက်ဇိုးမရှည် ကြာရှည်မခံတဲ့ ရူးသွပ်မိုက်မဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ဒေါသ ကြီးထွားလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားအသိညဏ်များက အပြင်ဘက်သို့ လွင့်ပါးစီးမျောပါသွားပါတော့တယ်။
ဒေါသူပုန်ထခြင်းနဲ့ဒေါသဟာ စိတ်ကို ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်စေပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒေါသဟာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်က အဲဒါကို ထောက်ခံ အားမပေးပါ။
ဒေါသတစ်မိနစ်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် နောင်တကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်လာဆုတောင်းပတ္တနာမှ “အကျွန်ုပ်တို့ကို ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်ပြစ်မှားတဲ့ သူများကို အကျွန်ုပ်တို့က ခွင့်လွှတ်သကဲ့သို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အမှားများကို အကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ပထမဆုံးခွင့်လွှတ်တဲ့သူဟာ အောင်ဆုကို အနိုင်ရရှိပါတယ်။ တကယ့်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ လက်စားချေခြင်းထက် ပိုလို့ကောင်းပါတယ်။ လက်တင်စကားမှာ အကြံပြုထားတာကတော့ “အခြားသူများကို မကြာခဏ ခွင့်လွှတ်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်တော့ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့”ဆိုတာပါ။ ဒေါသထွက်ဖို့ လွယ်ကူလျင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။
အခြားသူများဟာ ဇက်ကြိုးကို အနေတော်အံကိုက် ထိန်းကိုင်နေစဉ် အမြန်နှုန်းအရှိန်ကို ကောင်းစွာနားလည်သကဲ့သို့ ဒေါသတည်းဟူသော လှိမ့်နေတဲ့ရထားကို ချုပ်တည်းထိန်းထားတဲ့သူဟာ တကယ် စစ်မှန်တဲ့မောင်းနှင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ “သင် မဖွင့်ဟဘဲနှုတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါ သင်ဟာ ဒေါသရဲ့အသာစီးရနေမှုကို အလျင်အမြန်ပြီးစီးသွားစေပါတယ်”။
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ဒေါသထွက်တဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင် အပြင်ဘက်ရောက်နေပါတယ်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ဒေါသရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုယင် သူဟာ နောက်ထပ် ရန်သူကို ကြောက်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးသလား?
Book of Wisdom စာအုပ်မှာ Ben Sira က ကိုးကားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သင်ပါးစပ်ကို ထောင်ချောက်ကဲ့သို့ ခုတုံးလုပ်ဖို့ အကြီးအကျယ်ရှုံ့ချတဲ့အတွက်ကြောင့် သင် ဒေါသမထွက်ပါနဲ့။ ဒေါသဟာ အမုန်းတရားကို မွေးမြူပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ ချစ်ခြင်းကို မွေးမြူပါတယ်။
“ငါ မင်းကို ခွင့်လွှတ်တယ်”လို့ ပြောဆိုခြင်းဟာ အကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ များစွာအင်အားသြဇာပြည့်တဲ့အရာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ အညံ့ခံအရှုံးပေးခြင်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ အတူတကွ သွားကြပါစို့ - လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့က ခွင့်လွှတ်လျင်ခွင့်လွှတ်ချင်း အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိတ်ခံစားမှုအရ အကျွန်ုပ်တုိ့ကို ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်စေတဲ့သူကို လက်ထိပ်ခတ်မထားနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ လုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့ လက်ပိုက် ကြည့်နေရတဲ့ အခြေအနေအတွက် အစားထိုးလျော်ကြေးပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒေါသတွေပြည့်နေတဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားမှု များစွာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းကတော့ အင်အားပါဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ များစွာကြီးမားတဲ့ ခံစားမှုကို သွတ်သွင်းမွေးမြူပေးပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ခွင့်လွှတ်တဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရွေးချယ်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပါဝါကို ပြန်လည်ဆယ်တင် ပြန်သိမ်းယူပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ ခွင့်လွှတ်မှုအတွက် ထိုက်တန်မှု ရှိ- မရှိ ဒါက အကြောင်းမဟုတ်ပါ။
Shakespeare က Coriolanus မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “ဒေါသဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသား ဖြစ်တယ်။ အကျွန်ုပ်ဟာ အကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် တို့ကာ ပင့်ကာ စားတယ်” ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ အခြားသူများရဲ့အမှားများကို ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါသူပုန်ထခြင်းက အားလုံးကို လက်နက်ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်မှုဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အပြည့်အ၀ ကောင်းပါတယ်။ ဆေးပညာအလိုအရ ဒေါသကို သိမ်းဆည်းထားတဲ့သူများဟာ သွေးတိုးရောဂါဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ အနာရောဂါများနှင့်နှီးနွှယ်ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အတိတ်က မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေများ- အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖွယ်ရာအခြေအနေများက ပို၍ပို၍ ထိခိုက်နာကျင်စေပြီး သင်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါကို Dr Redfold Williams က ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ဒေါသထွက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လွယ်လွယ်ကူကူ စိတ်ထဲစွဲထင် သတိတရရှိနေခြင်းက နှလုံးသားအတွက် ဖိအားများဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို အခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားများက သောကဗျာပါရကိုဖြစ်စေတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဝေဒနာများကို ဆက်သွယ်ထားပြီး အခြားဘေးဥပဒ်များကို ကူးဆက်တိုးပွါးစေပါတယ်။
မခံသာတဲ့နာကျင်မှုများဟာ အနာတရဖြစ်စေဖို့ မိနစ်ပိုင်းမျှသာ အချိန်ရယူဖို့ လိုအပ်နိုင်ပေမဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့သူကို တစ်ခါ တစ်ခါ ခွင့်လွှတ်ဖို့ကတော့ အချိန်များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
အစကနဦး အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒေါသ- ၀မ်းနည်းမှု- ရှက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဆန့်ကျင်ဘက် ဝေဒနာများကို တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ စိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်တဲ့မျက်လုံးများမှတဆင့် အကျွန်ုပ်တို့ကို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်စေတဲ့လူကို ကြည့်ရှု့ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူပါတယ်။
အချုိ့လူများဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ ကလေးဘ၀မှာ သူတို့ချစ်တဲ့ သူတို့ယုံကြည်တဲ့သူများက အနာတရဖြစ်စေခဲ့တဲ့ထိခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ သူများဟာ အထူးသဖြင့် ကျပ်တည်းခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်များကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပိုင်းတစ်စဖြစ်တဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းများကတောင်မှ အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာ အခြားသူများရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သတိမူမိခြင်းမရှိဘဲ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ခံရတဲ့သူများဟာ သူတို့က အကျွန်ုတို့ကို လွဲချော်မှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ သဘောမပေါက်နိုင်ပါဘူး။ အဲသလိုမဟုတ်ယင်လည်း အကျွန်ုပ်တို့က သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မသိပါဘူး။
အရေးကြီးတဲ့အရာက အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒေါသကို လွှတ်လိုက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများက တစ်ဖန် မတရားဖိနှိပ်မခံရဖို့ - အခြားသူများကို မတရားဖိနှိပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ကြားပေးပါတယ်။
ခွင့်လွှတ်မှုဟာ အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသို့ ဦးတည်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခွင့်လွှတ်ပြီးတဲ့အခါ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ များစွာ ရယ်မောနိုင်ပါတယ်။ နက်နက်နဲနဲ ခံစားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ပို၍ပို၍ အခြားသူများနဲ့ ဆက်စပ်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားများက ကြီးကျယ်တဲ့ အနာရောဂါ ပျောက်ကင်းခြင်းဆီသို့တောင် ဦးတည်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဲ့အနာဂတ်ဆီသို့ ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်ချင်သည့်တိုင်အောင် ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုစတင်ရမယ်ဆိုတာ မသိပါ။ Daily Thoughts and Prayers စာအုပ်မှာ Swami Paramananda က ပေးထားတဲ့ ဒီအကြံနောက်ကို လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
တစ်စိမ်းတစ်ရံများဖြင့် အနည်းငယ်ကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းက အဓိကအရေးပါတဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှုများကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခက်ခဲတဲ့အလုပ်များအတွက် အကျွန်ုပ်တို့ကို အဆင်သင့်ဖြစ်စေပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒါမှမဟုတ် အတိုင်ပင်ခံအကြံပေးပုဂိုလ်များထံမှာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဒေါသများ စိတ်ထိခိုက်ရခြင်းများကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါက နားထောင်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အားကောင်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံများကို အကျွန်ုပ်တို့ကို လမ်းဖွင့်ပေးပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နောက်ပိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ့်အရာကို ပြောဆိုရခြင်း ဒါမှမဟုတ် ပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အန္တရာယ်မရှိတော့ဘဲ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဝေဒနာကို လက်လွှတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းအုံးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးသကဲ့သို့သော ဒေါသကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့ နည်းစနစ်များက ထောက်ကူအကျုိးပြုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာအနေဖြင့် သိပ်များများစားစား ဒေါသမဖြစ်လျင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုကို ထိန်းထားသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ရပါတယ်……အန္တရာယ်ရှိစွာကြောက်ဖွယ်လိလိ မောင်းနှင်ခြင်းကဲ့သို့ - တံခါးများကို ဆောင့်နင်းခြင်းကဲ့သို့ ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုများကို ရိုက်ချိုးခြင်းကဲ့သို့ ဤသို့သော ဆန့်ကျင်ဘက်အတွေးများနှင့် ဒေါသရဲ့ဖော်ပြချက်များကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အပြစ်တင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အရှုံးအနိုင်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ အဲဒါကို အကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတိုင်း ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကို ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
“ငါတကယ် နားမလည်ဘူးဆိုတာ ငါခံစားမိတယ် ”- ဆိုတဲ့ “ ငါ ”-ဖော်ပြချက်- ထွက်ဆိုချက် စသည်ကို အသုံးပြုတာဟာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်လို့ ထိရောက်တဲ့သက်ရောက် မှုကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်- ပြန်လည်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခံစားချက်များကို ပြောဆိုရေးသားဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အမူအရာဖြင့် ပြသနိုင်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, November 29, 2010
သင်ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ကတိပေးပြီးတဲ့အလုပ်ကို သင် ကတိတည်ပါ
သူတော်စင်များနဲ့ ဂုရုများရဲ့ဘ၀များကို အကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ရှု့မယ်ဆိုယင် သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများအတွက် အတိမ်းအစောင်းမခံတဲ့ ဓလေ့စရိုက်တစ်ခုကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို ကွာခြားသွားစေ သာလွန်သွားစေတဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကတော့ သူတို့ဘ၀ရဲ့ရည်မှန်းချက်များအတွက် လုံ့လ၀ီရိယရှိတဲ့ ကတိပေးပြီးတဲ့အလုပ်၊ ကတိက၀တ်၊ ဒါမှမဟုတ် သစ္စာစောင့်သိခြင်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဟာ မိုးရွာရွာနေပူပူ ဒေါင်ကျကျပြားကျကျ သင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို မစွန့်ဘဲ စွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်အတွက်ဖြစ်စေ လောကီအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်စေ ရရှိဖို့ ဒါဟာ အမှန်တရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစား၊ သိပ္ပံ ဒါမှမဟုတ် ၀ိဇ္ဇာနယ်ပယ်များမှာ လောကီပန်းတိုင်ကို ရရှိခဲ့တဲ့သူများတောင်မှ သူတို့ကတိ ပေးပြီးတဲ့အလုပ်များမှ တဆင့် ရင်သပ်ရှု့မောဖွယ်ရာများကို ပြီးမြောက်စေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး(Rabindranath Tagore)ရဲ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းမှ ဖြစ်ရပ်အတိုအထွာတစ်ခုကို ပြောကြည့်ပါရစေ။
သူဟာ သန္တိနိကေတန်(Shantiniketan)ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ နေ့စဉ် ကြိုးပမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတုန်းက Mahatama Gandhi က သူ့ဆီသို့ ခရီးလှည့်လည်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အများပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကို ပြောဆိုဖို့ အဲဒီနေရာကို သွားရောက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် သူတို့နှစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ ခေါင်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးကြခြင်းဖြင့် သူဟာ တဂိုး(Tagore)နဲ့ အချိန်များစွာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ နေ့လည်စာစားပြီးတဲ့နောက် Gandhi က အနားယူဖို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တို့ဆုတောင်းရာနေရာရှိ အလုပ်သမားအချို့ ,Tagore ရဲ့ တပည့်နောက်လိုက်များက သူ့ကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ Gandhiji! အကျွန်ုပ်တို့ကို သင် ကူညီနိုင်မလား?” လို့ သူတို့က မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ “ဘာများပါလဲ?”လို့ Mahatma က ပြန်မေးပါတယ်။ “ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ Rabindranath Tagore ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ကြတယ်”လို့ သူတို့က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ “သူဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း မနေပါဘူး။ ဆရာဝန်က သူ့ကို အနားယူဖို့ ပြောထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက မလိုက်နာပါဘူး။ နေ့လည်စာ စားပြီးယင် ချက်ချင်းဆိုသလို အလုပ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။ ခေတ္တအခိုက်အတံ့မျှ အနားယူတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေး မထိခိုက်မပျက်စေချင်ပါဘူး။”
Gandhi က ပြောပါတယ်။ သူ့ကို အနားယူဖို့ အသင်တို့က အကျွန်ုပ်ကို ပြောစေချင်တာလား? သူတို့က ပြန်လည်ပြောပြကြပါတယ်။ “သူဟာ သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဆိုတာကို အကျွန်ုပ်တို့ သိတယ်။”
Gandhi ဟာ အနည်းငယ် အနားယူပြီးတဲ့နောက် သူဟာ Tagore-ရဲ့ နေထိုင်ရာနေရာကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Tagoreဟာ သူ့ရဲ့အလုပ်မှာ နက်နက်နဲနဲနစ်မြှုပ်ထားတာကို Gandhi က တွေ့ရပါတယ်။ Tagore က မော့ကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီမှာ ရပ်နေတဲ့ Gandhi ကို မြင်ပါတယ်။ Tagore က သူ့ကို မေးပါတယ်။ “သင်ဟာ ခပ်စောစောပဲ သင်ရဲ့အနားယူရာကနေ ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ သင် သက်သောင့်သက်သာ မရှိလို့လား?”
Gandhi က ပြန်ပြောပါတယ်။ “သင်ဟာ နေ့လည်စားကို စားပြီးတာဖြစ်လို့ အနားယူဖို့ သင့်ကို ပြောရန် လာခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုအနားယူမယ်ဆိုယင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဟာ ပျက်လိမ့်မယ်မဟုတ်။ သင်ဟာ ဒီရက်များမှာ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမနေဘူး။”
Tagore က ပြန်လည်လို့ပြောပါတယ်။ “ဘယ်လိုလုပ် အဲဒါကို အကျွန်ုပ်က ပြုလုပ်နိုင်မှာလဲ? သင်နားလည်ဖို့ မှန်တာကို သင့်ကို အကျွန်ုပ် ပြောမယ်။ အကျွန်ုပ် အသက် ၁၂-နှစ်အရွယ်တုန်းက အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် တစ်နေ့တာအတွင်း ဘယ်အချိန်မဆို အနားမယူဖို့ အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်အထိ အဲဒီအဓိဋ္ဌာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ နှစ်ဘယ်လောက်လောက်များ နေထိုင်ရမှာမိုလို့လဲ? အဲဒီအဓိဋ္ဌာန်ကို အကျွန်ုပ် ဘာ့ကြောင့် ချိုးဖောက်ရမှာလဲ?”
Tagore ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ သူ့ပြုထားတဲ့ ကတိက၀တ်က Gandhi ကို လှုပ်ရှားသွားစေပါတယ်။ ၆၇-နှစ်ကြာသည့်တိုင်အောင် Tagore ဟာ ညပိုင်းအချိန်မှတပါး တစ်နေ့လုံး ဘယ်တော့မှ အနားမယူခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက် သူ့ထားတဲ့ကတိက၀တ်က Gandhi ကို သဘောကျ အထင်ကြီးစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Gandhi က ပြောပါတယ်။ အကျွန်ုပ် သင်ရဲ့ အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက်ကို ယခု သိပါပြီ။”
Tagore လို ကတိပေးပြီးတဲ့အလုပ်ကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က လောကီပန်းတိုင်များ ရရှိပြီးလို့ ပြောင်မြောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကမှာ အကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေ ပြုလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။
သူ့ရဲ့စာရေးသားခြင်းကို Tagore က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အလားတူသန္နိဋ္ဌာန်ဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းအမှုကို အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဆုံးဖြတ်ပြီး သန္နိဋ္ဌာန်ချပြီးဖြစ်မယ်ဆိုယင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာလည်းပဲ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခများက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွန်ုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာများတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အဲဒီလက်ဆောင်ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ အသီးသီး ရရှိနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ပေးပြီးတဲ့ကတိကို ချို့တဲ့ကင်းမဲ့နေမယ်ဆိုယင်၊ ကြိုးစားရာမှာ စိတ်မပါတပါ ဟက်ဟက်ပတ်ပတ်မရှိ ဖြစ်နေမယ်ဆိုယင်တော့ မရရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ် ပုံမှန် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်လျင် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေတဲ့ တိုးတက်မှုကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများ ပြည့်စုံကောင်းမွန်လာလေလေ အကျွန်ုပ်တို့အတွင်းမှ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရင်းမြစ်များက ထိတွေ့ ဆက်စပ်လာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့မှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ များလာလေလေ အခြားသူများက အကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ပိုလာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးက အကျွန်ုပ်တို့ကို ကမောက်ကမဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုများဟာ အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ စိုးမိုးခြယ်လှယ်မှုရှိတော့မယ်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို တွေ့လာရပါလိမ့်မယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲညီညွတ်မှုဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှလုံးသားများ၊ နေအိမ်များသို့ ၀င်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ မိသားစုနဲ့ လူမှု့ဘ၀မှာ ငြိမ်းချမ်းလာပါလိမ့်မယ်။ ကျက်သရေမင်္ဂလာတွေ ပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်။
အကျွန်ုပ်တုိ့ဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သဘောပေါက်သိနားလည်ခြင်းများကို ရိုးသားစွာ စိတ်ဝင်စားလာပါလျင် အမှန်တကယ်ပဲ ပြုလုပ်ဖို့ နည်းလမ်းများ ရနိုင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Friday, November 19, 2010